Hatsiaka, Orana ary Tondra-drano ao Gaza Amin’ity Ririnina ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2013 12:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Français, Español, عربي, Ελληνικά, English
Fianakaviana Palestiniana ao #Gaza novonjena tamin'ny sambo noho ny tondra-drano. Ankoatr'izay: http://t.co/3IlcwTUy40 pic.twitter.com/kzUKdnNil4
Mampiantrano Palestiniana 1.8 tapitrisa i Gaza, izay nisedra 14 ora tsy misy herinaratra isanandro, nandritra ireo herinandro fito farany. Taorian'ny tondra-drano nateraky ny rivodoza Alexa izay nandalo tao amin'ny faritra, nambaran'ny Firenena Mikambana ho “faritra rava” i Gaza ary nandray anjara tamin'ny fividianan-tsolika i Qatar hampandehanana ny tobina herinaratra.
#Gaza: Niha-nihena ny olan'ny herinaratra rehefa niaina 50 andro tamina herinaratra zara raha nisy ! Ny fahatapahana herinaratra dia mahatratra 21 ora isan'andro ary indraindray aza mihoatra!— Omar Ghraieb (@Omar_Gaza) 16 Desambra 2013
Fandaharam-potoana vaovao ho an'ny herinaratra ao #Gaza: 8 ora mandeha dia 8 ora tapaka isanandro!
Safotry ny rano maloto ny avaratr'i #Gaza tamin'ny 2007, izao i Gaza manontolo no tondraky ny orana & izao tontolo izao mbola miady hevitra hoe mbola misy #fanjanahana ve! http://t.co/PnIGUQslOk
Ity lahatsary ity, avy amin'i Jehad Saftawi, nozarain'ny Institute for Middle East Understanding (IMEU), dia manomboka amin'ny fakàna an-tsary ny zaza palestiniana iray mandeha an-tongotra amin'ny tany mangatsiaka be (Lahatsary nampiasaina araka ny CC BY):